အိမ်နဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေရဲ့  လွမ်းစိတ်တွေကတော့ အတူတူပါဘဲ အကိုအောင်သာငယ်....
အစ်ကိုရေ စစ်ကိုင်းလမ်းပြီး ရင် အိမ်အလွမ်းကို အကြိုက်ဆုံးဗျ။
ကောင်းတယ်ဗျာ ဂစ်တာပါထည့်လိုက်ရင် ရှယ်ပဲနော်ဗျာ အားပေးလျှက်ပါဗျာ။
ကောင်းတယ် အစ်ကိုကြီး ...
အိမ်နဲ့တော့မဝေးပါဘူး လှမ်းနေတာဘဲရှိပါတယ် ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီသီချင်းက ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ် Sin dan lar ပြောသလို အစ်ကိုဆိုတာလည်း ခံစားကြည့် ခြင်တယ် အိမ်နဲ့ ပက်ပက်စက်စက်သေးနဲ့တဲ့ အစ်ကို ရဲ့ ခံစားချက်အသံပေါ့
ကျေးဇူးပဲဗျာ။ အသေအချာနားထောင်ရင် ငြီးမိလေရဲ.။ ဒီဖိုင်လေသိမ်းထားပြီး ဂစ်တာလေနဲ. ရောသမမွှေလုပ်လိုက်အုံးမယ်။ ဒါနဲ့စကားမစပ် ခိုင်ထူးရှိုး ဒီအပါတ်ဆစ်ဒနီမှာရှိတယ်။ အလွမ်းသွားထပ်ဖြေလိုက်အုံးမယ်။ မြန်မာစာစရိုတ်ခါစပါ သည်းခံ၍ဖတ်လော ရဲဘော်ရေ…..
အဆိုလဲ မပါဘူး..........ဆိုတာ အိန္ဒြာပါ
ခိုင်ထူးသီချင်းတွေထဲက အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေထဲမှာ အိမ်အလွမ်းလဲပါတယ်… အိမ်နဲ့ ဝေးနေရတော့ ပိုခံစားရတယ်… ခုတောင်အတော်လွမ်းမိနေတာ အဆိုလေးနဲ့ ဆို ငိုမိမလားပဲ…
ညီငယ်တယောက်ရဲ့ ဆန္ဒကို အခုလို အရေးတယူ ဖြည့်ဆည်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ အကိုကြီးရေ...
အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ အလွမ်းစိတ်... တိတ်တဆိတ်ရောက်လာတယ်"
တချို့တွေ နေနိုင်လွန်းတယ်ကို မျက်ရည်ကျမိလို့ပါ။
တချို့တွေ မနေနိုင်ပါမှ အိမ်မြန်မြန်ပြန်ရမှာမို့ပါ။ :(
ဒီလိုဆို သူငယ်ချင်းမောင်ဘဦး တီးပေးပါအကို။
အိမ်မှာပဲ နေရသောလည်း ဘီအေဘွဲ့ ကြီးပိုက်ပြီး ငိုင်နေရလို့ ပါ။
kom: ချမ်းမြေံပါစေ.... အဆုံးသတ်ကလေး စိတ်ထိခိုက်တယ်။
kom: တီးရင်းနဲ့ မျက်ရည်ဝဲမိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်။
kom: နျစ်ခါ နားထောင်ရင်း အချိန်ကိုတန်ဘို့းရှိတေအာင် အသုံးချသွားတယ။်
12 Jun 09, 15:37
kom: လိုက်ရသေးတယ်။ ငယ်ငယ်တုံးက သီချင်းတွေ ခိုင်ထူး. စိုးပိုင်း. တူးတူး. မျိူးကြော့မျိုင် (မကြိုက်ဘူးလား) ထူးအိမ်င်. စိုင်းထီးဆိုင် ခင်ဝမ်း. ခင်မောင်တို့။ (ဟမ်. ယောက်ကျားလေးတွေချည်းပါဘဲလား။) ကော်နီ. မေခလာ.
12 Jun 09, 15:35
kom: ကိုမဆလာက စောင်ပြောနေတယ။် ကိုအောင်သာငယ်နဲ့ လဲ အကျူံဝင်တယ်။ google ceo ကပြောတယ်တဲ့ အခု သက်မဲ့ကွန်ပြူတာ ကို ပိတ်ပြီး သက်ရှီလူသားတွေ နဲ့စကားပြောပါတဲ့။ တို့ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်နေတုံးနောက်ကနေ ပြောနေတာနဲ့ပိတ်
12 Jun 09, 15:33
kom: ဟော.............ရပ်သွာြး့ပီး. (တို့ကို ကိုအောင်သာငယ်ကြောက်ရတယ်။ သေချာပါပြီ။)
12 Jun 09, 15:32
kom: အခုတီးနေတာ ကို ချက်ချင်းရပ်ပလိုက်ပါ။
kom: ရတဲံ့သီချင်းတပုဒ် အိမ်ကို ဂဒီးဂဒီးပြန်နေမှသာ နားထောင်နိုင်တဲ့ သီချင်းတပုဒါ အဝေးရောက်သူတွေ အတွက်က တော့နလုံးသားမှာ သွေးယိဲုစီးသွားနိုင်တဲ့ အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သီချင်းပါ။ (နားထောင်ရင်းရေးသွားတယ်။ )
kom: နားထောင်သွားတယ။် ဟုတ်တယ် နဲနဲတော့ပျော့တယ်။ အသံမစုံလို့။ ဒါပေမဲံ. ဒီသီချင်းက တီးပြစရာကို မလိုဘူး. သီချင်းခေါင်းစဉ်ကြားရုံနဲ့ ရင်ထဲကိုသိချင်းစာသားက ရောက်လာပြီး. နားက ကြားယောင်မိစေပြီး နလုံးသာ မှာ နာကျ
12 Jun 09, 15:28
kom: ဘာလို့ အလွမ်းတွေဝေအောင် ဖန်တည်းချင်ရတာလဲ. ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင် နေစမ်းပါ။
12 Jun 09, 15:27
kom:ိမကပေမဲ့ လူလုံးပြတယ်လေ.
kom: အောင်သာငယ်: ကလူထွေး - ကျနော့် ဘလော့မှာ ကတာ မပါဘူးလေ... ဒါဆို ဆို၊ တီး၊ ရေးတော့ ရတယ် မဟုတ်လား ...း)
12 Jun 09, 15:45
kom: သိတ်မမြောက်သွားနဲ့နော.်သတိထားပါ။ ဒါ..ပင့်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
kom: strike သာရှိရင် ကျီးကိုဘုတ်မြောက် ဘုတ်ကို ကျီးမြောက်လို့ပြောဦးမယ်။
12 Jun 09, 15:44
kom: ကိုလူတွေးဘလော့ ဆိုက်ဘားမှာ တင်ထားပြန်ပြီးသီချင်းကို
(ပိုက်ဆံစုပြီး အိမ်ပြန်လည်မှပါလေ။ ဟိုအစ်ကိုကြီးရဲ့ အိမ်အလွမ်းသီချင်းကလဲ